Ndị otu a kpọrọ oku a ma kwe nkwa ahụ na nnukwu ọgbakọ ha chịkọbara, bụ ọgbakọ izugbe maka ndị eze ọdịnala niile nke steeti ahụ, nke ahọ 2018, ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'obi gọọmenti, n'Awka.
N'ozi nnọọ ya na mmemme ahụ isi okwu ya bụ "Nturu Ugo Dara Ụda Nke Gọvanọ Willie Obianọ Nakwa Ịkwalite Mmepe Na Ịdị n'Otu Nke Ala Igbo", onyeisi ndị otu ahụ ma bụrụkwa eze ọdịnala Ọnịsha, bụ Igwe Nnaemeka Achebe mere ka a mara na gọvanọ Obianọ emeela steeti ahụ ka ọ bụrụ e ji ama atụ n'ihe gbaaasa ezi ọchịchị, ọrụ ugbo, nchekwa, mmepe ime ime obodo, igwu okwe ndọrọ ndọrọ ghe anya oghe na ihe ndị ọzọ, ma kwuo na ha nwere olile anya na ọ ga-eduru steeti ahụ na ndị igbo baa n'ala e kwere na nkwa.
O kwuru na ha chọrọ ịnọ n'ọgbakọ ahụ wee kpaa ka ihe siri gbata kwụrụ n'ebe ụgbọ bu ndị Igbo aga dịka o siri metụta ọnọdụ ha n'okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala Nigeria, site n'ilekwasị anya na ntúrú ugo ahụ Obianọ nwetara n'okpuru ọchịchị iri abụọ na otu e nwere na steeti ahụ na nhọpụta ọkwa gọvanọ e mere n'ahọ gara aga.
Otu nnukwu onye ọbịa pụrụ iche na mmemme ahụ, ma bụrụkwa onyeisi izugbe nke òtù Ọhaneze Ndị Igbo n'ala Nigeria, bụ Chiifu Nnịa Nwodo kwuputara hoohaa na e nweela mmepe ghe anya oghe na steeti Anambra n'ihi ezi ọhụhụ ụzọ na ezi ọchịchị nke gọvanọ Willie Obianọ, ma too ya, rịọkwa ya ka o jide ka o ji.
Na ntụnye nke ya site n'ozi pụrụ iche ọ gụpụtara, onyeisi kọmitii haziri ọgbakọ ahụ ma bụrụkwa eze ọdịnala Ọkpụnọ, bụ Igwe Sunday Okafọ bunyere gọvanọ Obianọ ụkpa ekele, kọwaa ya dịka onye ndu maara nke ekwe na-akụ n'ịchị ọchịchị, ma kwuokwa na ha nwere ezi olile anya na site n'ọgbakọ ahụ, na ha ga-atụpụta ezi atụmatụ banyere ihe dị iche iche na-echere ndị Igbo aka mgba n'ala Nigeria nakwa otu a ga-esi wee gaa n'ihu.
Na nzaghachi, gọvanọ Obianọ, bụ onye ọñụ jupụtara obi, kelere ndị eze ọdịnala ahụ n'ihi ótú ha siri hụta ma na-agba akaebe banyere ezi ọchịchị ya na ọrụ mmepe na-aga n'ihu na steeti ahụ, otu ha siri gbaa mbọ pụrụ iche ịhụ na o nwetara mmeri dara ụda n'okpuru ọchịchị iri abụọ na otu e nwere na steeti ahụ, nakwa ụzọ dị iche iche ha si adọnyere ọchịchị ya ukwù. O kelere ha maka otu ha siri kpaa agwa dị ka ndị ñụzuru mmiri ara añụzu n'ihe gbasaara nsogbu ndị Fụlani na-achị ehi na ndị ọrụ ugbo na steeti ahụ, ma kpọkuookwa ha ka ha nye aka n'imemila ihe gbasaara otu nzuzo na steeti ahụ site n'iburu ozi baa n'ime ime obodo ha dị iche iche ma mee ka ndị ha na-achị maragasịa ihe egwù na ọghọm dị iche iche dị n'ịbà otu n'ozuzo na itinye aka n'ihe ọjọọ ndị ọzọ na-emebi obodo.
Gọvanọ mekwara ka a mara na ka e mechara nnukwu ọgbakọ ndị Igbo ahụ e mere n'ama egwuregwu Ekwueme dị n'Awka, na o zigaara ndị ògbò ya bụ gọvanọ ndị ọzọ nọ n'ala Igbo ozi banyere nkwekọrịta niile ahụ e nwere, kpọkuo ha ka ha lebà anya na ya ma nabata ya. Ọ rịọkwazịrị ndị eze ọdịnala ahụ ka ha gaa n'ihu n'inye ọchịchị ya nkwàdo na steeti ahụ iji hụ na ọrụ ọma ahụ o ji n'aka bụ nke ga-adịrị gaa n'ihu, ọbụnadị dịka ọ gbapeere ha mmemme ahụ, ma kpee ka Chineke nọnyere ha n'ihe niile dị iche iche ga-atụle na ya.
Gọvanọ Willie Obianọ (n'etiti); onyeisi Ọhaneze Ndị Igbo n'ala anyị bụ Nnịa Nwodo (n'akụkụ aka nri); Igwe Nnaemeka Achebe (n'akụkụ aka ekpè) dịka ha nọ na mmemme ahụ.